नयाँ बसपार्क प्रहरीमा घुसकाण्ड, इन्सपेक्टर प्रताप पौडेल घुस लिएको आरोपमा हटाइए ! – RadioMBC
Home > प्रशासन > नयाँ बसपार्क प्रहरीमा घुसकाण्ड, इन्सपेक्टर प्रताप पौडेल घुस लिएको आरोपमा हटाइए !
७ जेष्ठ २०७५, सोमबार १९:०८
महानगरीय प्रहरी प्रभाग गोंगबुमा अर्काे घुसकाण्डमाथि छानबिन सुरु भएको छ। प्रभागका इन्सपेक्टर प्रताप पौडेल घुस लिएको आरोपमा हटाइएका छन्।
स्रोतका अनुसार एक डिस्कोसँग डेढ लाख मागेको र जुवाखालबाट पैसा लिइसकेको प्रमाणसहितको उजुरी प्रहरी मुख्यालयमा पुगेपछि उनलाई हटाइएको छ। पौडेलको त्यहाँँबाट पोखरा विमानस्थलमा काज सरुवा गरी मुख्यालयले मदन कुमार सिंहलाई त्यहाँ ल्याएको छ।
पौडेल भन्दा अघि बसपार्कमा रहेका इन्सपेक्टर हरिहर सुनुवार घुससहित पक्राउ परेका थिए। गेष्ट हाउससँग ५० हजार घुस लिदालिदै गत मंसिरमा पक्राउ परेका थिए। उनीसहित जवान वीरेन्द्र बमविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकोमा उनीहरु निलम्बनमा छन्।
६ महिनापछि प्रभागमा अर्काे घुसकाण्ड मच्चिएको हो।
नयाँ बसपार्क इन्सपेक्टरहरुको रोजाईको पोष्टिङ हुने गरेको छ। नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा होटल तथा डान्सबारहरु छन्। उनीहरुले प्रहरीलाई आर्थिक प्रभावमा पारी बेश्यावृत्ति लगायत गतिविधि गराउने भएकाले प्रहरीले छिट्टै धनी बन्न खोज्दा लोभिने गरेका छन्। जसकारण बसपार्कमा कार्यरत प्रहरीहरु पटक पटक कारबाहीमा पर्दै आएका छन्। माथिल्लो तहका निगरानी संयन्त्र पनि कमजोर हुँदा उपत्यकाका ‘लाइन’ कार्यालयहरुमा यस्तो विकृतीहरु बारम्बार हुने गरेका छन्।